Kedu ihe kachasị elu na protein? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Top 5 ihe oriri protein dị elu - otu esi edozi
Kedu ihe kachasị elu na protein?
Akwa Nri Nri site na Nri Na-edozi ahụ (Ọtụtụ protein na 100 grams)
# 1 Nlele Spirulina (Isi mmalite) 100 gram 115% DV (57.5g)
# 2 Achịcha Soybean Na-acha Ọkụ 100 gram 87% DV (43.3g)
# 3 Grated Parmesan Chiiz View (Isi Iyi) 100 gram 83% DV (41.6g)
# 4 Lean Veal Top Round View (Isi Iyi) 100 gram 73% DV (36.7g)
Ndị mmadụ na-arụ ụka gbasara carbs na abụba yana ihe niile dị n’etiti ha. Agbanyeghị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile kwenyere na protein dị mkpa ma nwee ọtụtụ elele, gụnyere ike na ume na-arịwanye elu yana, n'ezie, ọnwụlata. N’isiokwu a, a na m eleba anya na nri isii na-atọ ụtọ juputara na protein ndị siri ike.
Nke ikpeazu bu akuku nke meme nke na-ese okwu karie na ntaneti nke m choro ime ka o doo anya. Number nke, otis. Achọrọ m ibido site na ihe ntakịrị ihe m na-atụghị anya ya n'ihi na ọ dị m ka ọ bụ obere oatmeal.
Ha so n'ụdị ọka kachasị mma n'ụwa. Ha na eriri ha dị mma, magnesium, thiamine ma ọ bụ vitamin B, na ọtụtụ nri ndị ọzọ. Mkpụrụ protein bụ 15% nke calorie niile, yabụ ọkara otu iko oats nwere gram 13 na calorie 303.
Otis bụ ọka na-enweghị ọka gluten nke nwere gluten, nke bụ ya mere enwere ọka oat na-enweghị gluten, nke pụtara na etinye ya iche iche. Nọmba nke abụọ, tuna. Ọ bụ ezie na tuna dị ukwuu na omega-3 fatty acids, o nwere ya ma e jiri ya tụnyere protein dị ezigbo mkpokọta.
Ihe anyị hapụrụ bụkarịrị protein. Mkpụrụ protein ahụ nwere 94% nke calorie ya, nke bụ tuna tuna n'ime mmiri. Otu iko nwere gram 39 nke protein nwere naanị calorie 179.
Ugbu a, ụdị azụ ndị ọzọ nwere protein na abụba na abụba kwa, ha na-adịkarị na nri ndị ọzọ, ọkachasị salmọn. Number atọ, akwa. Akwa àkwá bụ otu n’ime nri na-enye ahụike n’ebe ahụ.
Ha juputara na vitamin na mineral, abụba ndị siri ike, na ihe oriri ndị ọzọ nke ọtụtụ mmadụ anaghị eruru. Akwa buru ibu nwere ihe dị ka gram isii nke protein na ihe dị ka calorie 80. Ugbu a, ọtụtụ protin a sitere na akwa ọcha, na nri ndị ọzọ niile dị na nkochi ime akwa.
Nọmba anọ, lentil. Lentil bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma e si enweta protein bekee ma bụrụ ezigbo ezigbo isi maka ndị anaghị eri anụ na anụ anaghị eri anụ. Na mgbakwunye, ha dị elu na fiber, magnesium, potassium, iron, folic acid, na ọtụtụ nri ndị ọzọ dị mkpa.
Otu iko ma ọ bụ gram 198 nke lentil ndị nwere eserese nwere gram 18 nke protein nwere calorie 230. E nwekwara mkpo protein ndị ọzọ dị elu, dị ka soybans, chickpeas, na akụrụ. Number ise, dabere anụ ehi.
Anụ anụ dị oke elu na protein ma nwee nnukwu iron na vitamin B-12 yana ọtụtụ nri ndị ọzọ dị mkpa. Otu gram 85 nke anụ ezi esiri esi 10% nwere ihe dịka gram 22 nke protein na calorie 184. Ugbu a, anụ ehi na ọdịnaya protein ya jikọtara ọnụ na-akpata esemokwu nke na-ewetara m nri nri protein kachasị elu na ndepụta a.
Nọmba isii, broccoli. Maara na nke a bụ nnukwu ahụike, nke na-edozi ahụ nke ukwuu; Kalori maka calorie, ọ dị elu na protein ma e jiri ya tụnyere akwụkwọ nri ndị ọzọ nke mere m ji were ya tinye ya na ndepụta a. Otu iko, ịkpụ, nwere ihe dịka gram atọ nke protein nke ndị na-akwado ya na-ekwu na broccoli bụ protein dị mma karịa anụ uhie.
Nke mbụ, ọnụọgụ ndị ahụ ezighi ezi. Ha abuo n’ezie gram protein itoolu n’ime otu narị calorie kwa gram, nke na-eduhie eduhie ebe ọ bụ na anụ dị nnukwu kalori ebe broccoli pere mpe. Ọ bụ akwụkwọ nri na-acha akwụkwọ ndụ, ka emechara.
Otu calorie 100 nke anụ bụ obere ọrụ pere mpe, ihe dịka gram 50 ma ọ bụ obere, ma e jiri ya tụnyere 100 kalori nke broccoli, nke bụ ọtụtụ iko. Meme a enweghi kwa ihe gbara ọkpụrụkpụ na nri dị oke mkpa. Ya mere, ka anyị nye ụfọdụ onodu.
Onu ogugu mmadu ruru pesenti iri abuo kwesiri iri protein nke 60 kwa ubochi dabere na aro ndi mmadu.Ọ bụrụ na onye ahụ etinyeworị gram 30 n'ụbọchị ahụ ma chọọ gram 30 nke beef ma ọ bụ broccoli maka nri abalị, ịnwere ike iji 130 gram nke amịrị rie ihe dị ka kilogram 0,3, ezigbo obi umeala ma ọ bụrụ na ị nọ. chee ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-ejekarị ozi ma ọ dịkarịa ala gram 200 ma ọ bụ 250, ma ọ bụ ị nwere ike iri gram 980 ma ọ bụ kilogram 2.1 nke broccoli, nke bụ ihe dịka iko 10 zuru ezu.
Yabụ na ọ bụghị naanị banyere ọnọdụ ị masịrị gị, ọ bụkwa ihe ndapụta ga-ekwe omume na nnọkọ, yana dịka ị nụrụ mgbe m na-ekwu ọtụtụ oge n'isiokwu ndị ọzọ, ihe gbara ọkpụrụkpụ dị ezigbo mkpa mgbe anyị na-ekwu maka nri na-edozi ahụ. Daalụ maka ikiri. Ọ bụrụ n’ịchọtara isiokwu a bara uru ma ọ bụ masị ya, biko nye ya mkpịsị aka aka ma denye aha na Channel Nutrition Authority YouTube site na ịpị nnukwu bọtịnụ ọbara ọbara n’okpuru isiokwu.
N'ụzọ dị otú a, ị gaghị echefu isiokwu ndị ọzọ dị ka nke a. (egwu dị egwu)
Kedu mkpụrụ osisi kachasị elu na protein?
Guava. Guava bụ otu n'imeọtụtụ protein-mkpụrụ osisi bara ụbagburugburu. Ga - enweta gram 4.2 nke ihe dị n’ime iko ọ bụla.21.10.2020
Ọ dị njọ iri akwa 4 n’ụbọchị?
Sayensị doro anya na ihe ruru 3 dumakwamakaụbọchịzuru okenchebemaka ndị ahụike. Na nchikotaAkwana-ebulite cholesterol HDL mgbe niile. Maka 70% nke ndị mmadụ, enweghị mmụba na mkpokọta ma ọ bụ LDL cholesterol.Ọgọst 23 2018
Ozi gbasara nri nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya, ka anyị na-arịa ọrịa na sayensị, ajụjụ a ka ga-adị, kedụ nri anyị kwesịrị iri maka ezigbo ahụike? Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, na 1950s sugar n'ezie touted dị ka ike na arọ ọnwụ enyemaka. N'ime afọ 1990, arahụ na - enweghị abụba weghaara, ka ọ na - erule mbido afọ 2000, carbohydrates ghọrọ ihe kachasị egwu niile. Abịa n’ihe gbasara ahụike anyị, anyị enwetakwala ozi dị iche iche.
Àkwá bụbu nwoke ọjọọ, ma ugbu a, ha ejiri ya dị ka isi iyi protein. Naanị otu ọgbọ gara aga, mmanụ nke ebe okpomọkụ, gụnyere mmanụ aki oyibo, ka a na-ewere dị ka ihe iyi egwu dị egwu nke ahụ ike. Ọ̀ bụ na o yighị ka o siri ike ilo? Ma olee otu anyị si ama ahụike site na hyp? Yabụ kedu ihe anyị kwesịrị itinye n'ime ahụ anyị, ihe abụọ dị na hotplate taa, àkwá na mmanụ oyibo, anyị na ndị dibia obi bụ Dọkịta Andrew Freeman na Dọkịta Michael Miller sonyeere anyị, ndị so dee akwụkwọ ọhụrụ na-ese okwu banyere nri anyị. sonyere anyị na nchọta ha kpatara ihe m hụrụ n'anya s ka anyị bido na akwa, ọ bụ na ha dị mma, ha adịghị mma, ụfọdụ na-ekwu ee, ụfọdụ adịghị, na echere m na ọ dị mma na unu abụọ gbakọtara dị ka ndị ọrịa obi na-achọ nri nwetara na anyị kwesịrị na ekwesịghị iri nri, mana ha abụọ ekwenyeghị na akwa, nke na-adọrọ mmasị! - Ee, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ.
nwere ike nrụgide na-akpata mgbu azụ
Anyị gara nri ụtụtụ n'ụtụtụ a, mụ na Michael bụ ndị enyi, mana anyị nwere echiche dị iche. - you tụrụ akwa? O nwere akwa, enwere m oatmeal, mana ihe m ga-agwa gị bụ na usoro nri nri ndị America maka ndị America apụtaghị rue mbubreyo 2015, ma ha na - ekwu ugbu a na ị ga - enwe kọlestrọl kachasị ala na nkezi akwa gburugburu 200 Nwere milligram nke cholesterol, nke ahụ bụ ihe ziri ezi.
Fọdụ ọmụmụ buru oke ibu na ụfọdụ meta-nyocha nke bụ ọmụmụ sitere na ọmụmụ na-egosi na mgbe ị na-erikwu akwa, ị ga-enwekarị ọrịa shuga ma ọ bụ mee ka ọrịa shuga ka njọ. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị. Yabụ na ọ dị ka àkwá bụ isi ihe na-eri nri na nri ndị America, na ụfọdụ ọmụmụ sitere na Harvard, choline gosipụtara na ọ nwere njikọ na ọrịa kansa prostate, n'ọmụmụ ihe ndị ọzọ ọ dị ka ọ nwere njikọ na ọrịa kansa, na enwere ezigbo ọtụtụ n'ime ha Ihe akaebe na-ebilite na ihe niile dị iche iche na-emepụta ihe ndị dị ndụ na nke mbụ nke choline karịsịa. - Ọ bụ na anyị achọghị choline? - Ee kpọmkwem. - M na-eri akwa maka choline. (Dr.
Freeman chịrị ọchị) - Echere m, ụfọdụ ndị na-achọ choline mgbe ha na-eri akwa, ma eleghị anya ị nwere ike ịgakwuru Dọkịta Miller n'ihi na amaara m na ị nwere echiche dị iche banyere akwa. ya mere- Enwere m echiche dị iche nke àkwá, ma dịka o siri pụta, akwa ọcha na-abụkarị nnukwu protein na vitamin ma dị ezigbo mma
Mana nkochi a nwere cholesterol dị n’ime ya, mana ihe anyị nwere ekele bụ na ọnụọgụ cholesterol dị n’ime akwa belatara ihe dịka pacenti iri ise n’afọ 30-40 gara aga maka ọtụtụ ihe. Otu bụ otu esi atụle cholesterol na àkwá na-ezighi ezi. Ọ dị ugbu a na nyocha kachasị nso nso a achọpụtala na cholesterol dị n'ime àkwá dị nso na 150-160 ma na-aga n'ihu na-akawanye mma.
Ọ bụ ihe dịka 200, ma eleghị anya ihe dịka afọ 10 gara aga, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300 na 1970s, mana echere m na isi ihe ọzọ dị mkpa bụ nkochi ime akwa ka ị nwee Oline n'ime ebe ahụ. I nwekwara vitamin, ezigbo vitamin. - you si n’ezie na-ekwu na choline dị n’ime ya bụ ihe dị mma, mana ọ bụ - N’ihi ya a sị m na choline bụ ihe dị mma. - Ma nke ahụ bụ ebe nke ahụ, na na, n'ihi na nke ahụ ziri ezi, ọ bụrụ na ị gbagwojubeghị anya, ugbu a, ị na-enwekwu mgbagwoju anya n'ihi na Dọkịta Freeman na-ekwu, 'Ọ dị mma, Choline' - Ọfọn, echere m na ọ laghachiri ụfọdụ n'ime ọmụmụ ihe ọ bụ ezie na ọ bụ n'ihi na oge ụfọdụ ị nwere ike ịhọrọ ọmụmụ ma chọta ihe ị na-achọ, echekwara m na enwere esemokwu banyere - M ga-ekwu okwu na ọkwa choline n'ọtụtụ nri ndị a dị site n'ọtụtụ isi mmalite.
Nke a bụ ezigbo ebe ndọpụ uche. Know maara ọmụmụ Harvard nke naanị akwa abụọ na ọkara n'izu na-eme ka ohere ị nwere ọrịa cancer prostate site na pasent 80 mụbaa? - Enwere ọmụmụ ihe ndị ọzọ anaghị egosi otu ihe ahụ - Achọrọ m ịsị na echere m na nke a bụ ngalaba m. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ dị m ka anyị dịka ndị dọkịta na-agba mbọ ịdebe magazin niile na anyị na-agụ, mana ọ dị ka ọmụmụ ọhụụ na-apụta kwa ọnwa na-emegide nke ọzọ. - Nnukwu tweak bụ Healthtù Ahụ Ike Worldwa, nri? n'ụzọ ziri ezi na-ahụ ha dị ka ụdị ozu, ọ bụ ya mere ha ji mee nyocha na nyocha.
Nke ikpeazụ dị na mba 34 ma ha na-egosi na ndị mmadụ na-eri oke choline, ọkachasị n'ụdị akwa, nwere ọtụtụ ọrịa kansa karị, ọkachasị kansa eriri afọ.- Laghachikwute gị, Dọkịta Miller, anyị ga-aga laghachi azụ na ntakịrị ebe a. - Ya mere nkochi ime akwa na-enye aka mee ka anya anyị dị mma, ya mere ahụike ahụike, ahụike ụbụrụ na choline bụ ọnọdụ nkwalite ọnọdụ ya mere enwere ọtụtụ ihe na-akwalite ezi ahụ ike na akwa na oke.
Unere jupụtara na protein?
'Ve nụla nke ahụuneredị elu na potassium (rie otu maka mkpịsị ụkwụ!) Ma ha nwekwara ihe dị ka gram 1.6proteinn’ime iko ọ bụla. Ha bụ ezigbo ụzọ nke eriri, ọgwụ mgbochi, vitamin A, B6 na C, na magnesium.12bọchị 12 2021
Enwere m ike iri akwa 10 n’ụbọchị?
Sayensị doro anya na ihe ruru 3 dumakwamakaụbọchịdị mma maka ndị ahụike. Na nchikotaAkwana-ebulite cholesterol HDL mgbe niile. Maka 70% nke ndị mmadụ, enweghị mmụba na mkpokọta ma ọ bụ LDL cholesterol.Ọgọst 23 2018
Enwere m ike iri àkwá 4 kwa ụbọchị?
N'ozuzu,na-eri akwadị nchebe zuru oke, ọbụlagodi na ị nwerena-eri nriihe ruru 3 dumakwamakaụbọchị. Nyere ha nso nke nri na ike ike ike, mmaakwanwere ike ịbụ otu n'ime nri kachasị mma n'ụwa.Ọgọst 23 2018
seattle ka Portland igwe kwụ otu ebe kpochapụwo
Kedu nri ndị kachasị enweta protein?
Ndia bu uzo 10 di egwu nke nwere protein: 1. Azu 2. Akwukwo nri 3. Anaghi aru aru, okuko na-anu anu 4. Nwere ehi ehi (tinyere nro, sirloin, anya gburugburu) 5. Skim ma obu mmiri ara-abughi 6. Skim ma obu ala -abụ yogọt 7. Azụ na-abaghị uru ma ọ bụ nke nwere abụba dị ala 8. Àkwá 9. Nri anụ ezi (obi anụ)
Kedu nri dị na protein maka imepụta ahụ?
Azụ protein a juputara na abụba omega-3 na vitamin D, ọ dịkwa obere na mercury ebe ọ bụ obere na obere na usoro nri. Gbalịa ịkwanye ha n'ime poteto a kụrụ ma ọ bụ kọlịflawa iji belata uto siri ike ha. 17. Steak (Top ma ọ bụ Ala Gburugburu)
Nri ndị dị a inaa dị na protein maka ụkọ ọnwụ?
Ihe mgbakwunye protein. Mgbe ị na-agbanye oge maka enweghị ike isi nri, mgbakwunye protein nwere ike ịba uru. Whey protein bụ ụdị protein dị elu site na nri mmiri ara ehi, gosipụtara na ọ dị oke irè na iwulite ahụ ike, ma nwee ike inye aka na ọnwụ. Ọdịnaya protein: dịgasị iche iche